ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာအေလီရွန်များ | တိုယိုတာအေလီရွန်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Lks 380 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Allion 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် ZRT260-3024180) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks...
Lks 480 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Allion 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် ZRT261-3020564) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...
Silver Toyota Allion 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Black Toyota Allion 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Black Toyota Allion 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
Pearl white Toyota Allion 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger...
Toyota Allion A 20 2011
Lks 448 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Allion A 20 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင...
Toyota Allion A 18 2011
Pearl white Toyota Allion A 18 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push St...
Toyota Allion A 15 2011
Lks 422 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Allion A 15 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push St...
Pearl white Toyota Allion A 20 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push St...
Pearl white Toyota Allion 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 268 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Allion 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 319 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Allion 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Lks 150 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Allion 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airb...
တိုယိုတာ အယ်လီရွန်ကားတွေကို ပြည်တွင်းများ အသုံးပြုမှု ဒီလောက်မများပေးမဲ့ ၀ယ်ယူ စီးနင်းမှု တစ်ခုအနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ၁၃၀၀ စီစီ မထုတ်တာရယ်။ ပုံစံက အဲလောက်ကြီး မဆန်းတာရယ်နဲ့ ဈေးကလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အနေအထားတစ်ခုမှာ မရှိတာရယ်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ တတ်နိင်မယ်ဆိုရင်တော့ လူတစ်ကိုယ် အကြိုက် တစ်မျိုးအနေနဲ့ ၀ယ်ယူစီးနိင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမမျိုးဆက်နဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက် ဆိုပြီးတွေ့ရတဲ့ အထဲမှာ အင်ဂျင်ဆိုဒ်ကို ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၈၀၀ စီစီနဲ့ ၂၀၀၀ စီစီတို့မှာပဲ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၀၀ စီစီမှာ နှစ်ဘီးမောင်းနဲ့ ၄ဘီးမောင်း ဆိုပြီး တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာတွေပဲ ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ဆီကားတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ VVT- I အင်ဂျင်ကြောင့် ဆူညံမှု ကင်းမဲ့မှုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး CVT-I ဂီယာတွေကလည်း မန်နျူးယယ် ဂီယာ တစ်ခုနည်းပါး ကိုင်တွယ် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တွင်းကို 15km/l ကနေစပြီး မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားပုံစံ က တိုယိုတာ အယ်လီရွန်ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခုကို ထင်သာ မြင်သာအောင် ရှေ့မီးလုံးတွေကိုကား ရှေ့ဘောနပ်ထပ်ခေါင်းနဲ့ တစ်ဆက်တည်း သွယ်တန်းထားပါတယ်။ ရှေ့မီးတွေကိုတော့ လေးထောင့်ကျကျတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး တိုယိုတာ အယ်လီရွန်ဆိုတာ ကို သိသာစေပါတယ်။ အတွင်းခန်းကတော့ ကားရဲ့ဒတ်ရ်ှဘုရှိ တီဗီနဲ့ ရေဒီယိုနေရာကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကားတွေဆီမှာ သိသာအောင် ဖောင်းကြွပြီး နေရာတစ်ကွက်ပြုလုပ်ပေးထားတာကို တွေ့နိင်ပါတယ်။ ဂီယာဘောက်စ်နဲ့ တံခါး တစ်လျှောက်ကို အရောင် အသွေး အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ကာလာတွေနဲ့ ဟိုက်လိုက်ခ် လုပ်ထားပြီး ရွှေဝါရောင်၊ ကျွန်းခွက်ပုံစံ ရောင်တို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ကားတွေဆီမှာတော့ ပုံစံက ဌင်း မော်ဒယ်သစ်တွေလောက် မဆန်းတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ကျစ်လစ်တဲ့ ကိုယ်ထည်ရှိတဲ့ တိုယိုတာ အယ်လီရွန်တွေကို ၂၀၀၁ကနေ ယနေ့ထိ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါး (၄)ပေါက် ဆီဒန်၊ ဆလွန်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျစ်လစ်တဲ့ ကိုယ်ထည်တဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ တိုယိုတာ အယ်လီရွန်များကို ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၇ ထိ ထုတ်တဲ့ ပထမ မျိုးဆက်မှာရော အဲဒီနောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်များမှာရော တွေ့နိင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ ၊ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်တွေကို အတွေ့ရများပါမယ်။ ပထမမျိုးဆက်မှာ LED ရှေ့ကားမီးတွေကို နောက်ဆုံး မော်ဒယ် စတိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ စတင် လက်ခံရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ မော်ဒယ် တိုယိုတာ အယ်လီရွန်များမှာတော့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့မီးပိုပြီး ချွန်ထက်စွာ LED မီးနှစ်လုံးပါ ပါရှိလာပါတယ်။ အတွင်းခန်းကတော့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အရင် မော်ဒယ်တွေနဲ့ တူညီနေပါသေးတယ်။
၀ယ်ယူရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အကြောင်း
တိုယိုတာ အယ်လီရွန်တွေဟာ လောင်စာဆီ စားသက်သာတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး အလတ်စား ကား ဆိုဒ်တစ်ခု ရှိတဲ့ ဆပ်ကွန်ပတ် ပါဖောင်မတ်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးလေးပေါက်ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်သော အတွင်းခန်းတွေနဲ့ ပါရှိပြီး အနောက်ဖက်က ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ ပစ္စည်းတင်ခန်းတွေ ပါရှိပါတယ်။ အခြားကားများ ဆီစားနေချိန်မှာ တိုယိုတာ အယ်လီရွန်ဟာ ပရီမီယိုကဲ့သို့ပင် ရီပို့တွေအရ ဟိုင်းဝေးမှာ ၁၂ ကီလိုမီတာကနေ ၁၅ ကီလိုမီတာ ထိသွားပြီးအဝေးပြေးလမ်းမှာ ၁၀ ကီလိုမီတာထိ သွားပါတယ်။ တိုယိုတာ အယ်လီ၇ွန်ရဲ့ အခြားပြိုင်ဖက်တွေအနေနဲ့ နစ်ဆန်း တီတာ နဲ့ မစ်ဆူဘီရှီ လန်ဆာ တို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းများ နဲ့ ရရှိနိုင်မှု
တိုယိုတာ အယ်လီရွန်တွေက ပုံမှန် တိုယိုတာ ဘယ်တာတွေထက်ကို ဈေးကြီးတဲ့ ကားတွေပါပဲ။ တစ်ပတ်ရစ် ၂၀၀၉ မော်ဒယ်ကို ကျပ် သိန်း ၁၈၀ နဲ့ ၁၉၀ လောက်ထိကို ရှိကြပါတယ်။ ကားဂရိတ်အပေါ် မူတည်ပြီးတော့လည်း ဈေးတွေက ကွာခြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းက တစ်ပတ်ရစ် တိုယိုတာ အယ်လီရွန်များအနေနဲ့ စလစ်လွတ် ပုံပြောင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်က ၁၅၀၀ အနည်းဆုံး လာတာမို့ ဌင်း အင်ဂျင်ဆိုဒ် ကနေပဲ စပြီး သုံးနေကြပါတယ်။ ညာမောင်းကားတွေ ဖြစ်ပြီး အော်တို၊ ဓာတ်ဆီ ကားတွေ ဖြစ်ပြီး တီဗီနဲ့ ပါဝါ၀င်းဒိုးကဲ့သို့ ပစ္စည်းများလည်း ပါရှိပြီး ငွေရောင်၊ ရွှေရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ငွေရောင်တို့ကို တွေ့နိုင်ပါမယ်။ ၂၀၀၉ လောက်ဆိုလျှင် ပုံစံတော်တော် ခေတ်ဆန်ပြီး သစ်လွင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အတွင်း ဂရိတ်မြင့်ပြီး တော်တော် သစ်လွင်လာတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ပတ်ရှ် စတပ်တွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။